रिक्त गभर्नर, अनिर्णित राष्ट्र बैंक र अन्योलमा बैंकिङ क्षेत्र ! ~ Banking Khabar
रिक्त गभर्नर, अनिर्णित राष्ट्र बैंक र अन्योलमा बैंकिङ क्षेत्र !
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर विहीन अबस्थामा छ । यसअघिका गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपाल विदा भएको करिव एकसाता पुगेको छ । गभर्नर विदा हुनु अगावै राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानूुनी व्यबस्था छ । तथापी यो अवधिसम्म गभर्र्नरका लागि तीनजनाको नाम समेत सिफारिस हुन सकेको छैन । कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई दिइएको छ ।
गभर्नरको रिक्ताता र काममा समस्या
सन्सार भर कोरोना भाइरसको संक्रमण र सन्त्रास फैलिएको छ । नेपालमा पनि यसको असर तिब्रगतिमा परीरहेको छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्र भने अन्योलमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर विहीन हुँदा राष्ट्र बैंकले यसबारेमा उचित कदम चाल्न सकेन । जसकारण राष्ट्र बैंक आफै अन्यौलमा परेपछि बैंकिङ क्षेत्र अन्यौलमा पर्ने नै भयो । लकडाउन नहुँदासम्म बैंकिङ क्षेत्र खुल्लै थिए । तर जव सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बस्यो । यो विषयमा राष्ट्र बैंकले आधिकारिक रुपमा लिखित सूचना दिएको छैन । यो गभर्नर नहुँदाको अन्यौलता हो भनेर बुझ्न सकिने अबस्था छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नहुँदा संचालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने अन्य निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् । कायम मुकायम गभर्नरलाई पुरै अधिकार नहुँदा थप अन्यौलता बढेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र अन्यौलमै व्यथित
अन्य ठुला निर्णयहरु फरक कुरा हुन् । तर मुलुकमा लकडाउन घोषणा गर्दा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय गर्न नसकेकै कारण बैंकिङ क्षेत्र अन्यौलमा रहीरहेको छ । केही बैंकहरुले आफूखुसी सेवा उपलव्ध गराउनका लागि केही काउन्टर खुल्लै राख्ने निर्णय गरेका छन् भने केहीले विदाका समय सुचारु हुने शाखा मात्रै खुल्ला राख्ने निर्णय लिएका छन् । तथापि एउटै अबस्था र एउटै निर्णय भएका छैनन् । केही बैंकहरुले अझै पनि राष्ट्र बैंकको आधिकारिक निर्णय पर्खेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक भएका कारण यसबारेमा राष्ट्र बैंक नै बढी जवाफदेही हुनुपर्छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विना के गर्ने भन्ने अन्यौल हुनु स्वभाविकै हो । यद्यपि सेवा उपलव्ध गराउने हकमा डिजिटल कारोबार, एटीएमको प्रयोग तथा मोवाइल वालेटहरु सूचारु भएकाले बैंकिङ सेवाबाट ग्राहकहरु समस्यामा भने रहँदैनन् । राष्ट्र बैंकको निर्णय नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र अन्यौलमा परेको बुझीएको छ ।